Wararka Maanta: Jimco, Sept 18, 2020-Xasan Cali Kheyre iyo Axmed Madoobe oo soo dhoweeyay magacaabista ra’iisul wasaaraha cusub
Jimco, September 18, 2020 (HOL) - Mas’uuliyiin iyo siyaasiyiin uu kamid yahay ra’iisul wasaarahii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa soo dhoweeyay magacaabistii xalay ee wasiirka koowaad ee dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, waxayna dhammaan Alle uga baryeen inuu xilka u fududeeyo.
9/18/2020 2:54 PM EST
Jimco, September 18, 2020 (HOL) - Inta la xaqiijiyay hal qof oo haween ah ayaa ku dhimatay saddax kalana way ku dhaawacmeen weerar Bam gacmeed ah oo lagu qaaday Maqaaxi ku taala xaafada Howlwadaag gaar ahaan laanta suuqa Xoolaha ee magaalada Beledweyne.
Jimco, September 18, 2020 (HOL) - Madasha xisbsiyada siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa soo dhoweeyay natiijadii kasoo baxday wada hadalkii dowladda federalka iyo dowlad goboleedyada, kaasoo ugu dambayn heshiis looga gaaray hannaanka doorashada soo socota.
Colaad beeleed kasoo cusboonaatay xadka Gobollada Hiiraan iyo Galgaduud
Jimco, September 18, 2020 (HOL) - Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Qulaale oo ku yaalla xuduudda ay wadaagaan Gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, waxa uuna u dhexeeya maleeshiyo beeleed walaalo ah oo halkaas ku wada nool.
Maamulka degmada Cadaado oo sheegay in carruur lagasoo qafaashay Qardho ay ku wareejiyeen Aabbihii dhalay
Jimco, September 18, 2020 (HOL) - Wararka laga helayo magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in ciidamada amaanka Galmudug ay gacanta kusoo dhigeen 8 carruur ah oo la sheegay in lagasoo qafaashay magaalada Qardho ee Puntland, islamarkaana sanadahii ugu dembeeyay lagu hayay magaaladaas.
Turkish lira hits new record low as cenbank meeting looms -Corona Stocks
9/18/2020 6:42 PM EST
UN agency to open response center in Somalia for vulnerable migrants -Xinhua
9/18/2020 4:13 PM EST
Somalia: Al-Shabab attacks intensify as election looms -DW
9/18/2020 3:58 PM EST
Democrat Joe Biden arrives in Duluth to battle President Donald Trump for Minnesota's middle-class voters -USA Today
9/18/2020 3:49 PM EST
Damaged Lake Street Target store set to reopen in November -Star Tribune
9/18/2020 3:47 AM EST
Feature: China-trained medic boosts war against COVID-19 in Somalia -Xinhua
9/18/2020 3:38 AM EST
Exclusive: Suspected arms dealers moved millions in Somali money transfers, report says -Reuters
9/18/2020 3:21 AM EST
Moorhead workers reach deal after alleging religious discrimination, unfair labor practices -Duluth News Tribune
9/18/2020 1:03 AM EST
Regional minister shot dead in southern Somalia -AA
9/18/2020 12:42 AM EST
5 Rising African Startups in 2020 -Tech In Africa
9/18/2020 12:38 AM EST
Music Matters: Rediscovering the forgotten sounds of Somalia -Arab News
9/18/2020 12:13 AM EST